Plastic akụkụ - Mestech Industrial Limited
Plastic akụkụa na-ejikarị ya na ngwá electronic, ngwa eletriki, ọgwụgwọ, inye ụlọ, ụgbọala, ụgbọ elu, ụlọ ọrụ, ngwá ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Plastic resin nwere ike kpụ ọkụ n'ọnụ n'ime ebu oghere inweta ụdị dị iche iche na nha nke plastic akụkụ na ngwaahịa. Dabere na mmepe nke teknụzụ kemịkalụ nke oge a, ọtụtụ ụdị plastik na-emepụta n'ọtụtụ buru ibu.
Mestech etinyela aka na imepụta akụkụ plastik, imepụta ọgwụ ebu na ịkpụzi ọgwụ na akụkụ na ngwaahịa, yana usoro ọgwụgwọ dị ka eserese ihe osise, ịde akwụkwọ silk na ịtụgharị akwụkwọ. Ngwaahịa plastik anyị maka ndị ahịa bụ ndị a:
Lọ plastik maka eletriki
Plastic akụkụ maka electronic
Ugboro abụọ injection ịkpụzi akụkụ
Medical ọgwụ ọgwụ ebu na ịkpụzi
Uzo plastic ngwaahịa
Post nhazi nke plastic akụkụ
Plastic panel na 3D nano ihuenyo ebi akwụkwọ
Ngwaahịa plastic naịlọn
Metal wet ịkpụzi
Prooflọ na-enweghị mmiri
Njirimara nke ngwaahịa plastik:
1 ọkụ dị mfe Ọ nwere ike iji mee akụkụ na ngwaahịa dị fechaa.
2 Ezigbo nkwụsi ike kemịkal na nguzogide corrosion Ọtụtụ plastik nwere ezigbo mmebi mmebi nke acid, alkali na ọgwụ ndị ọzọ
3 ezigbo ihe mkpuchi eletriki, plastik ndị a na-ejikarị bụ ndị na-eduzi ọkụ eletrik, na nkwụsị elu ha na nkwụsị olu dị nnọọ ukwuu. Ya mere, a na-eji plastik eme ihe n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ eletriki na igwe. Dị ka plastic gwara mmanụ akara cable.
4 Ezigbo ihe mkpuchi ọkụ Igwe ọkụ nke plastik dị obere, nke yiri 1 / 75-1 / 225 nke ígwè,
5 dịgasị iche iche nke ike igwe. Ọ nwere nnukwu ike dị elu A na-ekesa ihe ndị e ji plastik mee, dị ka ike, ike ike, ịgbatị na ike mmetụta. N'ihi obere ike ya na ike ya dị elu, plastik nwere ike dị elu.
6 Ọ nwere nguzogide mmetụta dị mma, mkpochapụ mkpọtụ na absorption ujo.
7 Ezi eyi eguzogide na nghọta
8 Ezigbo plasticity: ọ dị mfe ịkpụzi ụdị dị iche iche na nha nke akụkụ ngwaahịa site na kpo oku ọkụ, ka ị wee nwee nnukwu mmepụta na arụmọrụ.
Mestech bụ ọkachamara na-emepụta ọgwụ na-akpụzi na plastik. Anyị nwere ike inye ndị ahịa ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ plastik, anyị na-atụ anya ịkwado gị.Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.